Haingam-pandeha mandeha bisikileta herinaratra 1000w? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Bisikileta elektrika 1000 watt - mitady vahaolana
Bisikileta elektrika 1000 watt - mitady vahaolana
Haingam-pandeha mandeha bisikileta herinaratra 1000w?
sahabo ho 35 mph
Nandinika bisikileta e-taloha aho taloha, ary gaga tamin'ny olona maro naneho ny heviny ratsy, aleo tsy miteny hoe tsy manao fiarovan-doha aho, marina izany, heveriko fa tsy misy azo omena tsiny. satria nanapa-kevitra ny tsy hanao fiarovan-doha amin'ny bisikileta izy ireo. Mazava ho azy fa nanapa-kevitra ilay mpandinika fa ny mitaingina bisikileta tsy misy aroloha dia risika tsy azo ekena ary izay tsy mitovy hevitra dia tonga dia **** Fa raha zavatra iray no nampianarin'ny coronavirus antsika dia azo antoka fa samy manana ny azy manokana isika. Manana fandeferana amin'ny risika. Ohatra, mbola tsy ho eo akaikin'i Sainsbury ianao na mpanao taovolo iray izay misambotra ny tanan'ny trolley miantsena mivoaka isan'andro saika isan'andro.
Ary ahoana ny amin'ny zaza sy ny trampolines? Rehefa mahita ankizy mihoatra ny iray mitaingina trampole amin'ny fotoana iray aho, indrindra fa ny iray mihoatra ny in-droa ny haben'ny iray hafa, ny hany henoko dia ny cr escendo taolana tapaka sy sirenan'ny fiara mpamonjy voina, ary raha mitsabo ahy amin'ny palpitations ny mpitsabo. , ny ray aman-dreny hafa dia toa tsy mahalala na inona na inona. Amin'ny lafiny atsimbadimbadika dia tiako ny mitondra fiara 15 heny ny fetran'ny hafainganam-pandeha nasionaly, mahazo fiaramanidina ho lasa fihodinana haingana, ary niditra am-peratra niaraka tamin'ny omby indray mandeha aza aho. Tena nampatahotra izany.
famerenana bisikileta brompton
Na izany na tsy izany dia tokony hampitandrina ny mpitafy fiarovan-doha rehetra aho fa ity fanadihadihana manaraka ity dia misy sary izay mety ho hitan'ny mpijery sasany manelingelina. Gadget tsy ara-dalàna manjavozavo antsoina hoe Speedbox 2. ary any ianao no mandeha
Matoky aho fa mijery an'io ianao ary mieritreritra hoe, 'Sompatra, iriko raha manana aho'. Midira, araka ny lazain'ny zanako vavy amin'izao fotoana izao. Ankehitriny, araka ny lalàna, misy e-bisikileta na bisikileta am-bisikileta manampy amin'ny herinaratra, hanomezana azy ireo ny anarany feno, afaka manampy anao hatramin'ny 25 km / ora fotsiny.
Na dia mahavita manafaingana anao mihoatra ny hafainganam-pandehan'izy ireo aza izy ireo, dia tery avokoa izy rehetra. Tena somary moana ho ahy izany raha mieritreritra ianao fa mihamalemy kokoa ny bisikileta tsy mandeha amin'ny herinaratra dia mandeha haingana kokoa. Indraindray haingana be kokoa, ny ataon'ity gizmo kely ity dia ny fanesorana ny fetra, noho izany ny hany fetra farany vitanao dia afaka mandaka.
Ka napetrako amin'ny bisikiletiko izao ny Speedbox 2. Tena mora izany, saingy avereno jerena fotsiny izay tokony hataonao. Mila lakile Allen ianao hanalana ny fonony amin'ny spindle.
Avy eo ianao dia nanantena fa nividy mpitaingina pedal niaraka tamina Speedbox ary niaraka tamin'ny maingoka dia hanaisotra ny pedal anao amin'ny alàlan'ny biriky manokana rehefa esorinao ny fonony ny Bosch Performance Line CX. Gunting roa hanapaka ny fifamatorana zip ary avy eo rehefa tonga tao amin'ny torolàlana tao amin'ny tranokala Speedbox aho dia naneho ny fomba fametrahana ny Speedbox raha manana toeram-pivoahana roa ianao fa ny tsipika CX misy efatra nefa soa ihany fa misy YouTuber foana izay manazava ny fomba ataovy izany. Nasehon'izy ireo fa raha manana iray amin'ireo bisikileta misy outlet efatra ianao, e, misy iray ao, ary avy eo ny iray ary iray ao ary iray ao, avy eo esory ny faharoa sy fahefatra eo aloha ary ampidiro ao anaty Sockets roa ireo ny Speedbox anao ary avy eo miaraka amin'ny ny tariby roa hafa, apetaho ireo tariby izay natsofokao fotsiny tao anaty boaty hafainganana.
Tonga izao ny fotoana lehibe. Ahodiko io ary antenaiko fa tsy hipoaka izany. Mba hanandramana ny Speedbox dia tonga tany amin'ny lalana tsy lavitra teo akaikin'ny toerana ipetrahako aho, afaka nitaingina jetpack teto ary mbola ara-dalàna tsara izany, ka ndao hojerentsika ny hafaingan'ny fandehany fa tena azo atao izany. mitodiha kely aloha Andao hojerentsika izay mitranga rehefa mampifandray ny Speedbox 2 isika amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra 'Walker' eo ankavia mandra-pahatongan'ny 10.30 km / ora ny refy.
Midika izany fa mahasarika. Ary any isika no mandeha. Ary ny zavatra voalohany holazaina dia ny malama dia tena malama tokoa.
Nanantena aho fa handeha avy amin'ny aotra mankany Simon-Cowell adiny iray ary izaho dia ao anatin'ny antsasaky ny segondra monja ao an-damosiko. Matetika, rehefa eo amin'ny 15 mph ianao dia mijanona fotsiny ilay zavatra, fa miaraka amin'ny Speedbox dia mandeha foana isika. 1718202123 Mila mandeha tongotra tsara be izao aho. 26272829Mankanesa any.29, 3030.5Oh Andriamanitro Ka, raha ny tena izy, ny Speedbox 2 eto dia midika fa mandeha amin'ny hafainganam-pandeha eo anelanelan'ny 20 sy 25 mph aho rehefa miasa ary rehefa tena manosika ny tenako hiditra amin'ny faritra misy ny areti-mifindra myocardial aho, mahazo manodidina ny 30.
Ankehitriny dia tsy azoko natao ny nanandramana ara-dalàna ny vokatry ny Speedbox teo amin'ny elanelan'ny bisikileta, saingy ho gaga aho raha tsy nampihena hatramin'ny 25%, miankina amin'ny fampiasana azy. Ny Speedbox 2 dia mitentina manodidina ny £ 130. Mendrika ve izany? Raha ny fanatanjahan-tena no fampiasanao voalohany ny bisikiletanao dia mety tsy maninona izany raha manao fanatanjahan-tena adiny iray amin'ny 15 na 25 km / ora ianao.
Fa raha mampiasa ny bisikiletanao mankany amin'ny toerana iray ianao, e, amin'ny làlambe tsy miankina iray dia hahatonga anao any amin'ny antsasaky ny fotoana. Mahatsapa mitaingina bisikileta tsy misy soratra fa misy boaty hafainganam-pandeha, ary raha hidina kely fotsiny ianao amin'ny bisikileta mahazatra dia hitondra anao hatramin'ny 25 kilometatra isan'ora. Ary avy aiza io antsasaky ny kilaometatra fanampiny isan'ora io? Heveriko fa afaka miady hevitra ianao fa raha - bisikileta voafetra any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe, mety ho hitanao ny lalan-tongotra maro kokoa izay soloin'ny e-bisikileta mangina.
Fa ho mora ny hamerana amin'ny fomba elektronika ny hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny tanàna, toy ny ahafahany misoroka ny drone anao tsy hisidina amin'ny faritra voafehy. Ankehitriny dia nihomehy momba ny filaminana aho teo aloha. Raha mandeha bisikileta amin'ny tanàna aho amin'izao andro izao, mazava ho azy fa manao fiarovan-doha aho, fa raha mitondra 100 metatra mankany amin'ny fivarotana any amin'ny tanàna mandry ao amin'ny firenena aho dia mamelà ahy, fa miatrika ny loza mety hitranga aho.
Raha heverinao fa mahatonga ahy ho mpandoka tena amin'ny fanaovana risika tsy ilaina io dia matahotra ny hieritreritra izay hiantsoana olona toa an'i Sir Ranulph Fiennesor Neil Armstrong ratsy fanahy aho, aleoko mirary soa anao, na inona izany na inona risikao. Raha fantatrao fa manana e-bisikileta ianao, dia azonao atao ny mizara izany amin'izy ireo. Raha tsy izany, misoratra anarana amin'ny famerenana bebe kokoa momba ny fitaovana sy ny haitao natao hanamorana ny fiainana, ary hahita anao amin'ny manaraka, manana Arlo Guthrie aho.
Ara-dalàna ve ny eBike 1000w?
ny1000w bisikileta mandeha herinaratra mandehasahabo ho 35 mph (56,32 km / ora) amin'ny tany lemaka.14. 2020.
Inona ny bisikileta herinaratra watt ambony indrindra?
Noho izany, maro ny fanjakana no mihemotraeBikeOutput amin'ny latsaky ny1000W. Cap 16eBikesamin'ny herin'ny max 750W; ireo dia; Arkansas,California, Colorado, Delaware, Iowa, Maine, Michigan, Missouri, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Texas, Utah, Washington, ary Wisconsin.
Fantatrao ve fa amin'ireo bisikileta amidy isan-taona any Etazonia, dia eo amin'ny 250.000 eo fotsiny ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra? Na dia kely aza izany dia toa nitombo ny isa nandritra ny taona maro tamin'ny fivarotana e-bisikileta. Androany dia ampitahainay ny endriny, ny volavola ary ny fampiasana bisikileta e-dimy namboarin'ny olona tsara ao amin'ny orinasa. Ary mijanona hatramin'ny farany hahitanao ny fampitahana an-doha ny lohahevitra rehetra! Glenn aho, ary andao tonga any.
Misaotra anao nahita ny Mind's Eye Design! Miaraka amin'ny orinasa toa Aventon dia mahazo orinasa natokana hanampiana ny rehetra amin'ny bisikiletany bisikileta na firy taona na firy. Miezaka izy ireo ny manamboatra bisikileta mora indrindra izay azo antoka fa mitazona anao.
Sinch dia iray amin'ny maro amin'ny tsenan'ny vokatra e-bisikileta ary miaraka amin'ny endriny azo ovaina mifanaraka amin'ny anarany, tetezamita maharikoriko eo amin'ny fitaovam-pitaterana sy fitaovam-pitaterana, Sinch fotsiny io! Ankoatry ny fametahana mora foana ao anaty vatan'ny fiaranao, ny Sinch koa dia misy fiatoana eo anoloana sy kodiarana 20 'x 4' mba hahatonga ny dianao hahazo aina na amin'ny làlana. Te hahafantatra ny fomba fandehanan'ny bisikilety ianao, sa tsy izany? Ary koa, ankoatry ny kodiarana efa voalaza, izay miantoka ny fivezivezena mora foana, ny Sinch koa dia manana tohana pedal ambaratonga dimy miankina amin'ny fanofanana tadiavina. Na, raha tsy tianao iray mihitsy, dia misy koa fiasan'ny gazy hahafahanao mankafy ny toerana fotsiny.
Ny salan'isan'ny Sinch dia manodidina ny 40 kilaometatra amin'ny fiampangana tokana. Na izany aza, raha mampiasa ny endri-javatra throttle mandritra ny dia ianao dia afaka manantena ny antsasak'izany. Hafainganam-pandeha ambony indrindra 32 km / ora dia tsy azo forohana.
Raha mitady Sinch izy ireo dia alefa any Etazonia sy EU! MOAR Bike dia orinasa miaina bisikileta. Mpitaingina amin'ny fampiasana isan'andro izy ireo ary tia manamboatra bisikileta afaka manampy. Fantatr'izy ireo ihany koa fa ny haingam-pandeha dia mampisy fahasamihafana kely amin'ny e-bisikileta fa tsy amin'ny bisikileta nentim-paharazana.
Satria ny MOAR Bike dia maniry e-bisikileta mahafinaritra, azo antoka ary azo itokisana mba hahatonga anao hiasa, ny maodelin'izy ireo rehetra dia manana ny mampiavaka azy lehibe. Batterie 48V Samsung, fampiatoana tanteraka, kodiarana 26 'x 4', ary fanampiana amin'ny haavo 5-level, miaraka amina asa kely kokoa toy ny tandrok'ondry sy ny fihodinam-peo, no tena mampiavaka azy. MOAR Bike isn Tsy io irery no mino ny filaminana.
Afaka manao toy izany koa ianao amin'ny alàlan'ny fanairana bisikileta tsy misy tariby, tsy misy halatra avy any Mengshen. Ho hitanao io fanairana mampihetsi-po be io miaraka amin'ny 113 dB ao amin'ilay famaritana. MOAR Bike dia manana maodely efatra.
Ireo rehetra ireo dia namboarina avy tamin'ny fototra iray ihany ary namboarina ho sokajy zana-tsokajy misy bisikileta elektrika. Ny Sun & Fun dia ho an'ny mpankafy anao mahazatra kokoa miaraka amina motera afovoany 250 na 350 W. Raha mitady haingam-pandeha bebe kokoa ianao, ny kodiarana aoriana 500W dia matanjaka kokoa, ary ny kapila kapila mekanika 180mm no mahavita azy.
Avy eo dia misy ny 02 ho an'ireo izay nanambola tamin'ny kalitao. Ny motera famerenana foibe 1000 W aoriana, ny batterie 48 V 17 Ah ary ny forongotra Shimano 8 hafainganam-pandeha dia miantoka ny fahafinaretana amin'ny familiana. Ary farany, raha mila ny haingana indrindra sy ny tsara indrindra ianao, dia ny Rapt2 no karazana anao.
Miaraka amin'ny motera haingam-pandeha mirefy 1000W, torsiera sensor ary peratra Shimano haingam-pandeha 9, soavaly dia tokoa ny Rapt2! Izaho dia Allie ary fotoanan'ny Trivia an'ny Maso. Raha mijery ireo sary ireo fotsiny ianao dia fantatrao hoe inona izany ary avy aiza izy io? Avelao ny valiny marina na ny vinavinanao tsara indrindra ao amin'ny fizarana hevitra etsy ambany. Mety ho sarotra ny mitady fomba hafa amin'ny fitaterana mahita sy mamorona ihany koa, saingy tsy avelan'ny bandy ao amin'ny SPLACH hanemotra azy ireo izany.
Hain'izy ireo ny mamily ny teknolojia farany ary manolotra safidy azo ampiharina sy sariaka amin'ny tontolo iainana. Ho fanampin'ny scooter elektrika lehibe isan-karazany, manandrana bisikileta mandeha amin'ny herinaratra koa ny SPLACH. The Stark dia bisikileta elektrika mahafinaritra.
Avy hatrany dia mahasarika ny maso ny famolavolana ny chassis, miaraka amin'ny kodiarana 20 'x 4' matavy sy ny havoana any aoriana izay mahasarika ny sainao. Raha mijery ny frame sy eo ambanin'ny fitoeran-kitapo ianao, dia ho hitanao ny fametahana bateria 48V 15Ah roa izay mamela halavirana 70 kilometatra rehefa mihazakazaka na hatramin'ny 100 kilometatra rehefa tsy mampiasa afa-tsy pedal. Raha miresaka fanampiana pedal: ny Stark dia manana ambaratonga 6 amin'izany, ary ny bisikileta dia mampiasa fampitana Shimano 7 hafainganam-pandeha.
Ary na dia tsy te hampiharihary ireo singa amin'ny alina aza ianao, ny Stark dia mety haka vongan-doha sy rangotra vitsivitsy. Izy io dia manana tariby tsy misy rano mihitsy aza hiarovana ny fifaliana mahafinaritra anao. Ary raha mila tsy misy ahiahy kely fotsiny ianao amin'ny alàlan'ny lalamby vaovao raha tianao, dia azonao atao ny mandray io hidin-trano io mba hiantohana ny ahiahinao.
Ny rohy dia ao amin'ny famaritana. Ny Stark no mpiara-mitory tonga lafatra ho an'izay tia mitety faritany, na amin'ny lalana tsotra na amin'ny fahafinaretana fotsiny! Ary ny SPLACH dia manatitra manerantany! Raha tianao ny tsy mirehareha amin'ny alàlan'ny hazakazaka am-bisikileta, na ianao izany? komuter iray? sa mety misy manantona eo afovoany? ampahafantaro anay amin'ny hevitra. Tianay ny mandre ny eritreritrao! Ny filana dia zavatra azon'ny rehetra ankasitrahana.
Rehefa misy ny filana dia misy ny faniriana ho tonga lafatra sy ho lehibe. Ho sarotra kokoa aminao ny hahita orinasa mazoto kokoa noho Ariel Rider Ebikes. Ny vinan'izy ireo dia ny hahazoany tombony betsaka amin'ny e-bisikileta ary avelao izahay hanao ny asany ho anao ary hiteny ho anao! Ny X-Class 52V dia demonia hafainganam-pandeha ary tsy bibikely izany; izy io dia natao ho iray amin'ireo bisikileta elektrika haingana indrindra an'i Ariel, izay manana haingam-pandeha mihoatra ny 50 km / ora.
Ny iray amin'ireo singa ao anaty mofom-panahiny dia ny haitao vy izay novolavolainy sy novokariny. Ny metaly dia manome tsela, herinaratra ary hafainganam-pandeha avo kokoa noho ny fitaovana nentim-paharazana nilona. Araka ny voalazan'ny anarany, ity Roadrunner ity dia manana rafitra bateria 52V izay mampiasa mpanamory 35A goavambe ary mitondra motera 1000W manana tanjaka 2000W avo indrindra! Ankoatry ny zava-misy fa ny X. mpanafika asfalta dia kilasy 52V ihany koa dia manana halavirana 70+ kilometatra sy fanampiana an-tongotra 5-dingana, sangan'asa tokony hoderaina satria ny halaviran'ny lalana dia 8 km fotsiny azonao atao ny mihazakazaka ity bisikileta ity andro tsy misy azy Mampiasà famerenana.
Mikasika ireo fiasa elektronika dia hahita seho LED ianao ho an'ny diagnostika haingana sy mora, jiro aloha sy aoriana ary seranan-tsambo USB roa. Raha te hitondra entana ianao, ity bisikileta milanja 300 pounds ity dia ho anao koa ary raha monina any USA na Canada ianao dia azonao atao ny manafatra Ariel Rider Ebike anio! Miangavy amponga, azafady, satria tonga ny nomerao voalohany! Taorian'ny iray amin'ireo fandefasana mahomby indrindra tamin'ny tantaran'ny famoriam-bola tamin'ny 2015, nitohy ny momentum SONDORS Original Its. Nanokatra orinasa roa tapitrisa dolara roa hafa tamin'io taona io ihany.
Nanomboka teo dia nampihontsina ny tontolon'ny bisikileta herinaratra izy ireo ary mikasa ny hanohy izany hatrany. Ka bisikileta elektrika inona no mety ho tsara hipetraka amin'ny toerana laharana voalohany misy antsika? Tianay ny hampahafantatra anao ilay kintana rock! Ity bisikileta kanto sy mampiavaka ity dia misy loko telo; ny supernova velona, ​​ny mainty klasika mattika ary ny takelaka konservatif. Ny Rockstar dia noforonina hatrany amin'ny tendrony ka hatrany amin'ny tendrony mba hiatrehana ity tany maneso ity.
Tsy mora velively ny mitondra fiakarana havoana, ary tsy mbola nahafinaritra kokoa ny nitondra fiara nidina! - Fampiatoana, herinaratra 750W hampiadana ny havoana rehetra avy amin'ny motera afovoany, ary herinaratra 21 amp-ora, avelan'ny Rockstar hamely ny lasantsy ianao ary hanao mozika fotaka. Araka ny ampoizinao, ny Rockstar dia tsy malaina amin'ny hafainganana. Hafainganam-pandeha 45 km / ora sy sakany 40-60 kilometatra, arakaraka ny fampiasanao ny pedal fanampiana, manaova fotoana fohy.
Ny famindrana haingam-pandeha 11 haingam-pandeha miaraka amina rafitra shifter sy ny rafitra famonoana kapila hydraulic dia ahafahanao manohy mifehy ny safidinao rehefa mitondra fiara. Ny Rockstar dia manohana haavo 300 kilao ary milanja 83 pounds eo ho eo. Ny endriny dia namboarina sy namboarina avy tamin'ny aliminioma, ary ny kofehy sy ny seza dia miantoka ny fenitra ahazoana aina sy ergonomika.
Ary vaovao be ho an'ireo any Etazonia, EU, na UK; Ny zanaky ny Sondor dia alefa any aminao, ary azonao atao ny manafatra ny ZanDORS Ebike anao anio! Raha tianao ity lahatsoratra ity, azonao atao ny manampy anay amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Like, ny fisoratana anarana ary ny fanavaozana ireo lahatsoratra ho avy.
Haingam-pandeha ahoana no hahatongavan'ny ebike 48v 1000w?
Ny mahery indrindrabisikileta elektrikaeny an-tsena dia ny Stealth Bomber. Milanja 116 lbs ary misy fonosana bateria 1,5 kilowatt ora ary rafitra fandefasana haingana 4 ora izay mety mihazakazaka 110 ka hatramin'ny 240 volts.
Hanao ahoana ny hafainganam-pandehan'ny ebike 2000 watt?
Ity bisikileta maxhafainganam-pandeha afaka mahatratra55km / h, izay tena tsara.2. 3. 2020.
Afaka mitaingina bisikileta elektrika ve ianao raha voarara tsy hitondra fiara?
Bisikileta elektrika(EAPC's) dia fomba fitateram-bola hafa mora vidy sy sariakampamilyiza ireotsy afaka mitondra fiara.Bisikileta elektrikamahafeno ny fepetra teknika manokanaAzaTsy mila misoratra anarana, miantoka fiantohana, mandoa hetra ary tsy mila lisansa intsonymitainginaizy ireo.
750W ve ampy amin'ny eBike?
Ho an'ireo mpitaingina mavesatra kokoa,750Ny W dia rehefa manomboka mankafy kokoa ny fampisehoana tany fisaka ary azo atao tsy tapaka ny havoana. Amin'ny herinaratra 1 000 W, ny ankamaroan'ny mpitaingina mavesatra dia ho faly amin'ny fampisehoana. Haingam-be ny 45 km / h (28 mph) dia mahazatra hatrany750E-bisikileta.6. 2019.
Haingam-pandeha ny motera hub misy 750W?
48V750WBBS02 MAXHafaingananaMPH 32.
Ampy ve ny 500W amin'ny eBike?
Amin'ny ankapobeny, ho an'ny olona antonony dia noforonina mahombye-bisikiletamanome mihoatra nyampyfahefana amin'ny500wna latsaka. Raha ny marina, mampitombo ny watts anaoe-bisikiletamiaraka amin'ny fatiantoka.2. 3. 2020.
500 watts ve ampy amin'ny e-mail?
Na izany aza, ny mpitaingina toy izany dia tsy hahita fahasamihafana lehibe raha ampitahaina amin'ny motera 250 W ambany ambany raha ny havoana mendrika rehetra. Marihina ihany koa fa500Ny W matetika no fahefana farafahakeliny ilaina ho ane-bisikiletahihoatra ny hafainganam-pandeha 32 km / h (20 mph).6. 2019.
Iza no bisikileta herinaratra 1000 watt tsara indrindra?
Bisikileta elektrika miisa 1000 Watt tsara indrindra LANKELEISI T750 Bisikileta mandeha amin'ny herinaratra. Base mafy sy frame. Ity bisikileta 1000 watt ity dia vita tamin'ny alimika aluminium avokoa. Izy io dia rindrambaiko matanjaka izay afaka mahazaka hatramin'ny 330 pounds. Ny bisikileta dia mijoro amin'ny kodiarana roa misy kodiarana 26 santimetatra ary 4 santimetatra ny hatevin'ny kodiarana.
Hatraiza ny herin'ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra?
Ny ankamaroan'ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra eny an-tsena dia misy ny motera manomboka amin'ny 250 W ka hatramin'ny 750 W. Ireo dia bisikileta mahazatra ary miankina amin'ny batterie azonao atao hatramin'ny 50 kilaometatra. Raha mafana fo ianao ary maniry zavatra hafa, hafainganam-pandeha ary mpihaza, dia tokony hikaroka ilay bisikileta elektrika misy herinaratra 1000 W ianao.
Tsy ara-dalàna ve ny fananana bisikileta 1000W e?
Avela bisikileta misy e 1000w? Any Etazonia, ny lalàna federaly dia tsy mandrara ny fananana marika e-bisikileta misy fanamarihana 1000w sy marika fiara hafa. Ny fanjakana tsirairay dia mazàna mamaritra ny e- moped amin'ny hafainganam-pandeha azo atao 30 kilaometatra isan'ora sy amin'ny faritra 1000W.